Kulankii Xildhibaanadda Baarlamaanka oo fashil ku soo dhamaaday iyo wada tashi u socda Farmaajo iyo Kheyre – Madal Furan
Hoy > Warka > Kulankii Xildhibaanadda Baarlamaanka oo fashil ku soo dhamaaday iyo wada tashi u socda Farmaajo iyo Kheyre
Kulankii Xildhibaanadda Baarlamaanka oo fashil ku soo dhamaaday iyo wada tashi u socda Farmaajo iyo Kheyre
Muqdisho (Madal Furan) Kulankii Xildhibaanadda Baarlamaanka DFS ayaa ku soo dhamaaday fashil kadib markii maaro laa waayey Ilaaladda Guddoomiye Jawaari iyo Kuxigeenkiisa 2aad oo gudaha u galay hoolka shirka loogu tala galay inuu ku qabsoomo.
Dhinaca kale Xukuumadda DFS ayaa ciidamo aad u tiro badan soo tubay xarunta gudaheeda iyo dibadeeda, kuwaasoo la sheegay inay ilaalinayen amaanka xarunta Baarlamaanka.
Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari ayaa muujiyey hal adag ay ugu babac dhigeen Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda.
Ma jirin wax gacan ka hadal ah oo ka dhacay xarunta gudaheeda, waxaase jiray buuq iyo sawaxan sababay inay hoolka shirku isu bedelo mid xaaladiisu kacsan tahay oo waxaa lumay degenaashihii iyo kala danbeyntii.
Farmaajo, Kheyre iyo Muudeey.
Xarunta Villa Somalia ayaa warar lagu kalsoon yahay sheegayaan in uu ka bilowday kulan u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo, Raysal Wasaare Kheyre iyo Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Muudey.
Kulankan ayaa la sheegay in ay uga arrinsanayaan sidii looga gudbi lahaa carqaladii maanta dhacday iyo weliba sidii loo meel marin lahaa mooshinka Guddoomiye Jawaari ka yaal.
Warar madax banaan ayaa waxay sheegayaan in ay suurtagal tahay in ay masuuliyiintaasi isku raacaan in kulanka Xildhibaanadda lagu qabto xarunta Villa Somalia si looga nabad galo Guddoomiye Jawaari iyo taageeryaashiiisa.
Wararka laga helayo magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in Xildhibaanadii u ololeynayey mooshinka Jawaari laga keenay inuu meel maro ayaa duhurnimadii maanta waxay dib ugu urursadeen hoteelka SYL ee magaaladda Muqdisho.
Xildhibaanadan ayaa lagu soo waramayaa inay qaadan kari waayeen in Mudane Jawaari uu kaga adkaado gacan ku haynta xarunta Baarlamaanka oo maanta la filayey in lagu gorfeeyo mooshinka xilka looga qaadi lahaa Guddoomiyaha.
Xildhibaanadan ayaa waxay dib-u-eegis ku sameyn doonaan wixii ay kala kulmeen xarunta Baarlamaanka iyo wadadda ugu toosan ee looga gudbi doono, waxayna tallo wanaagsan la qaybsan doonaan Guddoomiye ku xigeenka 1-aad kadib marka uu ka soo laabto Villa Somalia oo uu kula shirayo Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha
Ciidamadda Danab oo sheegay inay dhaawaceenCali Dheere
Duqeyn dhinaca cirka ah oo deegaano Jubbada Hoose ah ka dhacay xalay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay wixii uu kala soo kulmay Madaxda wadamadii uu booqday.